China Optical Brightener OB-1 Emeputa na Supplier | BGT
Optical Brightener OB-1agbakwunyere ọtụtụ ihe iji belata acha edo edo, melite ọcha, ma bulie nchapụta nke ngwaahịa. A na-eji ya n'ọtụtụ ebe na ahịa plastik. N'ihi ikike ya na-egbukepụ egbukepụ dị mma, ezigbo nkwụsi ike ọkụ, yana ndakọrịta na ọtụtụ ndị polymer.
(Kwuru, sị: Ozi nke ngwaahịa anyị bụ maka ntụnye naanị. Anyị anaghị aza ajụjụ maka nsonaazụ na-atụghị anya ya ma ọ bụ esemokwu patent kpatara ya.)
Ngwa anya Brightener Ukwu OB bụ ihe dị elu nke na-enwu enyo nke dị elu nke klas nke thiophenediyl benzoxazole, nke kwesịrị ekwesị maka ngwa anya na-enwu ihe nke polymers na ọkwa niile nke nhazi.
Ndị na-ahụ anya ịcha mma na-arụ ọrụ site na ịmịkọrọ ụzarị ultraviolet na inyefe ọkụ na-acha anụnụ anụnụ. Igwe ọkụ na-acha anụnụ anụnụ ga-ebelata agba odo nke polymer. N'ihu onye na-acha ọcha, dị ka TiO2, iji OB-1 ga-ewepụta ihe na-acha ọcha dị ọcha ma ọ bụ na-acha ọcha “karịa ọcha”.
Na CBS-127 bụ Optical Brightener metụtara na polymer, karịsịa maka PVC na phenylethylene ngwaahịa. Enwere ike itinye ya na polymer dị ka ụcha. Na-enwu gbaa na-acha ọcha na agba ga-ewetara na ngwaahịa ma ọ bụrụ na-eji ala ịta nkeCBS-127yana anatase titania. Ta nkeCBS-127 kwesiri itinye mgbakwunye ma ọ bụrụ na a ga-eji rutile anatase titania mee ihe.
Nke gara aga: Odido Remover
Osote: Polyester & Naịlọn Nucleator P-24